SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု၏ ABMA Journal Volume 1 No 8
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု၏ ABMA Journal Volume 1 No 8
ABMA Journal Volume 1 No 8
Posted by saffrontoward at 10:08 PM
Always welcome your advice
Saffron Group ၏ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်
About Saffron Mail Letter
cac(Burma) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
Statements in english
Freedom from fear (မြန်မာပြန်)
မြန်မာ့ သတင်း ကမ္ဘာ့သတင်း
Go to Alpha.com
Gmail Zawgyi font
"တပ်မတော် အပေါ်မှာ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း ကလွဲပြီး ဘယ်လိုမှ သဘော မထားပါဘူး။ အဲဒီအစွဲဟာ ဒီတပ်မတော်ဟာ ကျမဖေဖေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်နေတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်"
write your message here တွေးမိတာလေးတွေ ရေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်
People seeing this blog
နိုင်ငံရေး စာအုပ်များ အွန်လိုင်းမှာဖတ်ရန်
၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ /အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း /မြန်မာ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်
ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းခြင်း ၊ ညီမျှမှု ဆိတ်သုဉ်းခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ
NLD ၏ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ယာယီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လမ်းညွှန်မြေပုံ နှင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ် အတုအရောင် အမျိုးသားညီလာခံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောက်နုတ်ချက်များ
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် လက်စွဲ
ချင်းလဲင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း-၄ -Chin Forum
ပြည်သူတို့၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်း -NLD(LA) MALAYSIA
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၊ အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးနှင် တရားမျှတမှု
အာဏာရှင်၏ ကမ္ဘာအသစ် / မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ
၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း -ခင်ကျော်ဟန်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှုရက်စွဲ မှတ်တမ်းများ ၁၉၈၈ -၂၀၀၂ -ABSDF
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ဆိုတာဘာလဲ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ၏ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ၁၉၉၈-၂၀၀၃ -ခင်ကျော်ဟန်
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အဆိုပြုချက်
ရပ်ရွာ စည်းရုံးရေးသမားများအတွက် လက်စွဲစာအုပ် -The Burma Fund
မြို့ပြပြောက်ကျား စစ်ဆင်နည်း - ဂါမဏိ
မဟာဗျူဟာမြောက် အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲ အခြေခံအချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ခြင်း - ရောဘတ်၊အယ်လ်၊ဟယ်လ်ဗီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ လွတ်မြောက်ကာလ လှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ၂၀၀၂ -၂၀၀၃
ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း - ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား တရားစွဲဆို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း - ခင်ကျော်ဟန်(ရေနံချောင်း)
လွတ်လပ်ရေး၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနှင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု - ဦးခင်မောင်ကြီး(ဗကသခေါင်းဆောင်ဟောင်း)
ဖုန်းမော် အရေးအခင်း (သို့) သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေနေ့ - နစ်နေမန်း
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ (သို့)ဖုန်းမော် ကျဆုံးသည့်နေ့ - သမဂ္ဂစာစဉ်
တံတားနီနေ့ (သို့) တံတားဖြူ အရေးအခင်း - မတ်လ (၁၆)ရက်
ကလေးများ ၏ ဒေါသမာန် - ဘာတီးလ်တင့်တနာ
သားသတ်သမား စိန်လွင် - ဘာတီးလ်တင့်တနာ
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့် ဈာပန အရေးတော်ပုံ သမိုင်းမှတ်တမ်း - ပျိုပျိုမေ
အမြင့်ပျံခွပ်ဒေါင်း ( သို့ မဟုတ် ) ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး - ယနေ့မြန်မာ
7-July ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်း /ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကို အထိ - အောင်ဝေး
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်း - အောင်ထွန်း
ကိုဗဟိန်း (သို့) ညီညွတ်ရေး ဗိသုကာ -ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
အရေးတော်ပုံ ( ၄ ) စောင်တွဲ -
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း - NLD(LA)JAPAN
NLD အား နအဖ စစ်အုပ်စု ၏ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုများ အကျဉ်း
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် လူကြီးများ၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု အတွေ့အကြုံများ
ကြောက်ရွံ့ခြင်း မှ လွတ်ကင်းရေး နှင့် အခြားစာတမ်းများ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
စစ်အုပ်စု သက်တမ်းရှည်နေသရွေ့ (ကိုကိုးကျွန်း ထောင်ဝတ္ထု) - တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တစ်ဦး
အမြင့်ပျံ ပြည်သူ့လင်းယုန်သို့ ဂုဏ်ပြုခြင်း (ကိုကိုးကျွန်းထောင် မှတ်တမ်း) - အဝေးရောက် ကျွန်းပြန်ရဲဘော်(တချို့)
ကျောင်းသားထောင် တော်လှန်ရေးသမား (ကိုကိုးကျွန်း ထောင်မှတ်တမ်း) - ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်း
လူငယ်တဦးရဲ့ မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း - ဝင်းနိုင်ဦး
လူရှင်သချိုင်းများ အကြောင်း - နေလင်း(အ.က.သ)
ယမမင်းဥယျာဉ်သို့ အလည်ရောက်ခြင်း - ဂါမဏိ
မြင့်မြင့်ပျံပြီး ဝေးဝေးမြင်တဲ့ လင်းယုန် -အဝေးရောက် ကျွန်းပြန်ရဲဘော်တစု
အာဏာရှင်ကြီး(ဗိုလ်နေဝင်း) ၏ အတွင်းရေးများ - ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ(ဒု) ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းကြည်ဆွေ
မြန်မာ မြောက်ကိုးရီးယား ဆက်ဆံရေး
မြန်မာ့ တပ်မတော် တည်ဆောက်ခြင်း
တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး၏ တင်ပြချက် - ဗိုလ်ထက်မင်း
အမှောင်ကြားက ဗမာပြည် - ဝင်းတင့်ထွန်း
ဗမာ့ အကြိုသမိုင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း မြေပုံများ - သန်းထွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တွေးမြင်ချက် နှင့် မဟာဗျူဟာ
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြားနည်းလမ်း
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုရာဝယ် - ခင်မမမျိုး
နိုင်ငံရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ
ဖက်ဒရယ် နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
ဖက်ဒရယ် အကြောင်းလေ့လာခြင်း - ABSDF
သွေး နှင့် မြေကြီး
ပဉ္စမ မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း
ဦးဘဂျမ်း ၏ နိုင်ငံရေး အမြင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး ဖွင့်ဆိုချက်များ
ဗိုလ်မိုးကြိုး အပြန်နောက်ကြောင်းလှန်လိုက်သည့် ဗိုလ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း
ဗမာ့တော်လှန်ရေး - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး ပြဿနာ - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး မှ မြန်မာ သံရုံး လိပ်စာများ
ယုံကြည်ချက် ကဗျာများ (၁)
လွတ်လပ်ရေး စိတ်ဓါတ် မျိုးစေ့ချခဲ့သူ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ - ဗမာ့ခေတ် ဦးဘရင်
အမေ့ခံရသော မြန်မာ ကိုယ်စလှယ် အဖွဲ့ - ဦးသက်ထွန်း(အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို ဘယ်သူ သတ်သလဲ - ဦးခင်အောင်
ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့် - တက္ကသိုလ်တင်စိန်
ဗမာ့အောင်ဆန်း - မောင်ထင်
မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ - မိုးမခ
နောက်ကြည့်မှန် - မင်းကိုနိုင်
အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း - တက္ကသိုလ်တင်စိန်
ယုံကြည်ချက် မိုးကောင်းကင် နှင့်နွေးထွေးသော မနက်ဖြန် - ရဲရင့်အောင်
ရွှေဥဒေါင်း စုံထောက်မောင်စံရှား ပေါင်းချုပ် - ဒုတိယတွဲ
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိကလုပ်ငန်း ယန္တရားများ(၂၀၀၂)လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
၁၉၃၀ တဝိုက် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း - သိန်းဖေမြင့်
U Win Tin “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ”
ဗမာ့ကြယ်-ကွန်ယက်စာအုပ်စင်ရဲ့ အွန်လိုင်း စာအုပ်များကို မိတ်ဆွေများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်မျှဝေပေးခြင်းပါ
ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက်စာအုပ်စင် – စာအုပ်စာရင်း
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် အမေးအဖြေများ
ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒ နှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ
လူအ အိပ်မက် ၀တ္ထုတိုများ
သူငယ်ချင်းလို့ဘဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင်
လရောင်ကိုပန်၍ မိုးယံ၌ မွှေးမြမြဖြူစင်နိုင်ပါစေ
အောင်ခင် – တာရာမင်းဝေအမှတ်တရစာစုများ
စိတ် နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ၇ ယောက်
ပင်လယ်ကျား၊ အဏ္ဏ၀ါမီးစုန်းများ နှင့် အခြားဝတ္ထုများ
၀တ္ထုတို ၃ ပုဒ်
လူထုချစ်သမျှ လူထုဦးလှ (ပထမပိုင်း)
လူထုချစ်သမျှ လူထုဦးလှ (ဒုတိယပိုင်း)
ကြယ်စင်များ၏မိခင် – ကွယ်လွန်သူဒေါ်အမာ၏ ၉၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရ
၁၉၃၀ တ၀ိုက် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း
အရှေ့ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ – ပထမတွဲ
အရှေ့ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ- ဒုတိယတွဲ
ငွေစိန် လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးရင်း
ဓမ္မစကြာတရားတော် နှင့် အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တရားတော်
သိပ္ပံအမြင်နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အမေးအဖြေများ
ဇာတ်တော်ကြီး ဆယ် ဘွဲ့
Her infinite variety & other stories (အင်္ဂလိပ်)
မင်းသုဝဏ် _ မြန်မာစာမြန်မာမှု
တက္ကသိုလ်တင်ခ _ မြန်မာစာမြန်မာမှုကို ပြုစုပျိုးထောင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသူများ
မောင်ဇေယျာ _ စာပေသမိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွေးအမြင်များ
မောင်အံ့ _ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်
ဦးဟုတ်စိန် _ အများသုံး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓါန်
ဦးကျော်ရန် _ မူလပေါရာဏဒီပနီကျမ်း
ကြည်ဦး _ မြန်မာ့ရိုးရာ စကားထာများ
ကြည်ဦး _ စကားပုံအလင်းပြကျမ်း
မေငြိမ်း _ သတင်းသမားသတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့်စကားသံများ
နှစ် ၁၀၀ ကမ္ဘာ့စုံထောက်ဝတ္ထုတိုများ၂
မောင်ထင် _ ဗမာ့နိုင်ငံရေးသုခမိန်
မောင်ထင်_ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်အတ္ထုပ္ပတ္တိနဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း
ဦးပုကလေး _ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ
ဦးကျော်ငြိမ်း _ ရဲဘော်သုံးကျိပ်
သခင်သန်းထွန်း _ ဖက်ဆစ်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်လပ်ရေးသို့
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ဟောင်း)ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၁)
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ဟောင်း)ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၂)
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ဟောင်း)ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၃)
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ဟောင်း)ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၄)
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ဟောင်း)ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း(၅)
ဘာတေးလ်လစ်တနာ _ ဒေါမာန်ဟုန်-ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ
မောင်မောင်လှကြိုင် _ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
နှင်းယုလွင် _ ‘အမေ နဲ့ မေ’ ကဗျာစု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – လက်ရွေးစင် မိန့်ခွန်းများ
AUNG SAN SUU KYI – THE FIGHTING PEACOCK
ဦးဝင်းတင် _ ပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီ ရကိုရမယ်
ဦးခင်ကျော်ဟန် _ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း
ဦးခင်ကျော်ဟန် _ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲဆို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း
အောင်ဝေး _ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း
ဗမာပြည် လူငယ်အခြေအနေနှင့် တိုက်ပွဲ
ရောဘတ် အယ်လ် ဟယ်ဗွီ_မဟာဗျူဟာမြောက် အကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲအခြေခံအချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ခြင်း
၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှု ရက်စွဲမှတ်တမ်းများ
ဒေါက်တာဘမော် _ ဗမာ့လက်ငင်း-လွတ်လပ်ရေး
ဦးဘသိန်း _ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း
ဦးရွှေဘဲ _ မြန်မာပြည်အကျဉ်းချုပ်မှတ်တမ်း
နိုင်ပန်းလှ _ ရာဇဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း
အေးသိန်း _ ရတနာဂီရိ မှ သီပေါမင်းအမှတ်တရ
ဦးကုလား _ ရာဇ၀င်
မှော်ပိဆရာသိန်း _ ပစပ်ရာဇ၀င်
ဦးဖိုးကျား _ သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ
ဦးလှ _ ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပထမတွဲ
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ
ဦးအောင်ခင် _ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ
ဦးအောင်ခင် _ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ
ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင် _ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန်
သောင်းထိုက် _ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး
ဦးပညာ _ ကရင်ရာဇ၀င်
ပြုံး၍လည်း ကန်တော့ခံတော်မူပါ ရယ် ၍လည်း ကန်တော့တော်မူခံပါ
ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့2(06/27)
ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့ ၃ (06/27)
ကံချွန် - အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် (Nov 11, 2008)
ကံချွန် - မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း (Nov 11, 2008)
ကံချွန် -ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ (Nov 11,2008)
ကံချွန် - ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (Nov 11,2008)
ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ (Nov 11,2008)
ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ (Nov 11,2008)
ကျော်ဝင်း - စိန်ခေါ်ကြသူများ(06/28)
ချစ်စံဝင်း - တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား
ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကိုမောင်သွားထားလေမလား (07/29)
ချစ်ဦးညို - ရုက္ခစိုးနဲ့ အခြား ပြိတ္တာများ (08/06)
ချစ်ဦးညို - ရာဇကုမာရ (08/06)
ချစ်ဦးညို - ၀ိသာခါနှင့်သီတာ (08/06)
ချစ်ဦးညို - စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ (08/06)
ချစ်ဦးညို - ရှင်စောပု (08/06)
ချစ်ဦးညို - မလေးမဏိစန္ဒာ (08/06)
ချစ်ဦးညို -လင်္ကာဒီပချစ်သူ (08/06)
ချစ်ဦးညို - လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း (08/06)
ချစ်ဦးညို - နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် (08/06)
ချစ်ဦးညို - ချစ်သောပါဒဧကရီ (08/06)
ချစ်ဦးညို - ချစ်သူမင်းနန္ဒာ (08/06)
ချစ်ဦးညို-ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (08/06)
ချစ်ဦးညို - ယာဇ (08/06)
ချစ်ဦးညို - စာမရီသို့ထူးထူးခြားခြား (08/06)
ချစ်ဦးညို - မဏိစန္ဒာဥဒါန်း (08/06)
ချစ်ဦးညို - မဟာသေနာပတိ.(08/06)
ချစ်ဦးညို - အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ (08/06)
ချစ်ဦးညို - သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ (08/06)
ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် (06/28)
ပြည့်ပိုင်မူးအိမ် - ကျူးပစ်ဒ်၏ရင်ဖွင့်မြှား
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ကုန်ကြမ်း (0ct 10, 2008)
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ပန်းနုရောက်ပြကွက်ထဲက ကကြိုးလှတဲ့သတို့သမီး (oct 16, 2008)
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - သတ္တမမြောက်နတ်သမီး ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ခြံခုန်တဲ့ကြယ် ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - အချစ်နဲ့နက္ခတ် ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - နွေရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ချစ်သူကိုတိုင် သွန်းခတ်ခဲ့သောသစ်သီးများ ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် -မိုးကောင်းကင် လှည့်စားတဲ့ကြယ် ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - အချစ်ကိုကြက်ခြေမခတ်ကြေး ( oct 16, 2008 )
မဟာဆွေ - အင်္ကျီပါး (Nov 28, 2008)
မဟာဆွေ - သူပုန်ကြီး ( Nov 28, 2008)
မဟာဆွေ - စာရေးကြီး (Nov 28, 2009)
မင်းခိုက်စိုးစန် - ချောင်းကြည်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည (06/27)
မင်းခိုက်စိုးစံ - စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်(08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ - ခေတ်တစ်ခု၏အစ အဓိပါယ်တစ်ခု၏အဆုံး (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ - သုည (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ - ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် လမ်းဆုံ (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ - ကော်ဖီည (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစန် - ကလေးအတွေး (08/19)
မင်းလူ - သင်္ခါရများ
မင်းလူ - ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ (06/26)
မင်းလူ - အချစ်လို့အဓိပါယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ (06/26)
မင်းလူ - ငိုအားနဲ့ရယ်အား (06/27)
မင်းလူ - ခြေစစ်ပွဲများ - ၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ - အဖွားကြီးသုံးယောက်နဲ့စကားပြောခြင်း (၀တ္ထုတို) ( 06/26)
မင်းလူ - ဒေ၀တာမြို့တော်-၀တ္ထုတိုို (06/27)
မင်းလူ - အီးကော်လံ-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ - လေထန်ဖုန်း-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ - ညာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ-၀တ္ထုတို(06/27)
မင်းလူ - ဖူးစာရှင်ကိုရွေးတော့မည်-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ-ပြတိုက်ထဲက ပြဇာတ် (06/27)
မင်းလူ - ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် - ၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ - ချစ်မြှားရှင်အစ ချစ်မြှားရှင်အဆုံး (Nov 28, 2008)
မင်းသိင်္ခ - မ "တတ်ပါ့" (07/20)
မင်းသိင်္ခ - မြိုင်ဟေ၀န် (07/24)
မင်းသိင်္ခ - ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း၁ အပိုင်း ၂ (07/24)
မင်းသိင်္ခ - တစ်ပွဲစားဦးနှော အပါအ၀င် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/24)
မင်းသိင်္ခ - မိုးနဲ့အတူ (07/24)
မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြိုင်မဟာမမြလေး (07/24)
မင်းသိင်္ခ -ပေတလူ ( 07/24)
မင်းသိင်္ခ - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂ (07/24)
မင်းသိင်္ခ - မအောင်ရင် ( 07/24)
မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ ပျားဆွဲသောမုတ်ဆိတ် (07/24)
မင်းသိခ်-ဘမျိုးဘိုးတူဘယ်သ န်ဘမှန် (07/20) (pdf)
မင်းသိခ် - မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော (Nov 28, 2008)
မြသန်းတင့် - လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့်၊သက်အောင် - သမိုင်းစကားပန်းစကားနှင့် အခြားရသစာတမ်းများ (07/29)
ဲမြသန်းတင့် - လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် - ဂျူပီတာဖိုက် (07/08)
မြသန်းတင့် - မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ (07/29)
မြသန်းတင့် - ကြာညိုနံသင်းသောရေ၀တီမ (07/29)
မြသန်းတင့် - ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် (07/29)
မြသန်းတင့် မှောင်မိုက်မှာငို (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် - တိမ်းရှောင်သူ (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် - ၏ကရီဖွားစော (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် -မှော်ရုံတော်မှာ မောလှပြီ(ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် - စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (ဘာသာပြန်) (07/08)
ဲမြသန်းသင့် - လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်း ကြည့်ခြင်း (07/29)
ဲမြသန်းတသင့် - သြဂုတ်တစ္ဆေ နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/29)
မြသန်းတင့် - ရေပွက်ပမာ .. (07/29)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။(06/28)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် (06/27)
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန် ကဗျာများ ( 07/15)
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ပညာရဲ့ သဘော (07/16)
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည် (07/16)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ် (Nov 28, 2008)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် (Nov 28, 2009)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း (Nov 28, 2008)
တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း
တာရာမင်းဝေ အရှေမြို့ ရိုးကမိုးရေစက်များ
တာရာမင်းဝေ-ရွှေဖိနပ်မှာအစ မ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး
တာရာမင်းဝေ - ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ
တာ၇ာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ
တာရာမင်းဝေ သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင် ခွင့်ပြုမည
တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ေ ကျးမှု
တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ - ရှူး (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ - သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ -ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း (oct 11, 2008)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရုပ်ထုကျိန်စာ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရွှေစင်နတ်ဘုရား (ဘာသာပြန်) (09/03)\_
ဒဂုန်ရွှေမျှား -ရောဘ့်ဘင်ဆင်ကရူဆိုး (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား -သုံးဖော်ညီနောင် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - စောရသက်ပြင်း (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ငယ်ကချစ်အနှစ်တရာ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား -လုသစ်ပင်နှင့် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဝတ္ထုများ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကျွန်းမင်းသား (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်သူ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကဗလာနီအောက်ဝယ် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ထောင်မင်းသား ဦးဘိုးထော် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ချစ်သွေးဧကရီ(09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ဘ၀မုန်တိုင်း (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား - မေ၀ါ၏ကလဲံ့စား (09/03)
နန္ဒ - လေးရူးသုန်သုန် (ဘာသာပြန်) (07/29)
နီကိုရဲ - ဇွတ်
နီကိုရဲ - ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ
နီကိုရဲ - ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း (06/27)
နီကိုရဲ - ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ (06/27)
နီကိုရဲ - နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။ (07/08)
နီကိုရဲ - လှည့်စား (07/08)
နီကိုရဲ - အိုးလေး - (oct 11, 2008)
နတ်နွယ် - ကမ္ဘာစာပေ တစေ့တစောင်း (08/28)
နတ်နွယ် - ရတနာလှိုဏ်ဂူ (ဘာသာပြန်) (08/28)
နတ်နွယ် - မိုဗစ်ဗီးယား၏ အတိုင်းအတာနဲ့ အခြားဝတ္ထုတိုများ (08/28)
နတ်နွယ် - ရေအောက်တစ္ဆေ (ဘာသာပြန်)
နတ်နွယ် - အလည်လာတဲ့မိန်းကလေးရယ် (08/28)
နတ်နွယ် - မင်းမှာသစ္စာလူမှာကတိ (ဘာသာပြန်) (08/28)
နတ်နွယ် - ဒက်ဇယ်လာ (08/28)
နွမ်ဂျာသိုင်း - တစ်မျိုးညာနွဲ့ သွေမဖယ် ပိုးပါနဲ့မေရယ် (Nov 28, 2008)
နွမ်ဂျာသိုင်း - နွေလေကညင်း (Nov 28, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - ဆော်လမွန်သိုက် (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက် အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ အပိုင်း၃ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - ဆင်စွယ်မင်းသမီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - ရတနာပုံ (Nov 25,2008)
ရွှေဥဒေါင်း - အတွေးအမြင်နှင့် ရှူထောင့် (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့ အတွေးအခေါ်များ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း - မြသက်မော် (Nov 25, 2008)
လယ်တွင်းသားစောချစ် - ပန်းများကိုမွေးစေသူ (07/04)
၀တ္ထုတိုများ - ဆရာစုံ (06/26)
ဝေမူးသွင် - ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့ကြယ် ( oct 09, 2008 )
ဝေမူးသွင် - စိတ်ကောက်နတ်သမီး (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - ကျူးပစ်ဒ်ကိုတိုင်မသိတဲ့ မြှားတစ်စင်းအကြောင်း (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - သံယောဇဉ်ဖတ်စာ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - လူပျောက်ကြော်ုငြာ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - တစ်ခါတစ်ရံများ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြ င် (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - စက္ကုပန်းတွေရဲ့သီချင်း (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - အသဲကွဲလူရွင်တော် (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် - အဆင့်မြင့်ချည်တိုင် (oct 09,2008)
သုခ - ဒီဆောင်းဟေမာန် (Nov 28,2008)
သုခ - ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား (13 January, 2009)
သိပ္ပံမောင်ဝ - အဟိတ်…၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ (06/28)
သိပွံမောင်ဝ - စစ်အတွင်းနေစဉ်မှတ်တမ်း (Nov 28, 2009)
အကြည်တော် - စွယ်စုံလက်ဆောင်
အကြည်တော် - လှအိုးကွဲ
အကြည်တော် - သံသရာရထား
အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည (06/27)
အကြည်တော် - ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ် (06/27)
အကြည်တော် - သဲလှည်း(06/27)
အကြည်တော် - အိမ် အပိုင်း(၁) ( 06/27)
အကြည်တော် - အိမ် အပိုင်း(၂) -(06/27)
အကြည်တော် - အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့် … (07/04)
အကြည်တော် - ရီတန်းအောဖ့်ဘီလုး (07/05)
အကြည်တော် - ကျွန်တော်ထောင်းသောပေါင်များ (09/07)
အကြည်တော် - ပိုးကောင်များ (09/07)
အကြည်တော် - မိုးတိ်မ်ပုံပြင် (09/07)
အကြည်တော် -အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉ (09/07)
အကြည်တော် - တောသားကြီး (09/07)
အကြည်တော် - တခါက .. ငယ်ငယ်လေးတွေ (09/07)
အကြည်တော် - ကဝေပျိုနိဒါန်း (09/07)
အကြည်တော် - ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် (09/07)
အကြည်တော် - ပြတ်ထွက်သွားသော ကျောရိုးဆစ်လေးများ (09/07)
အကြည်တော် - နတ်နေကိုင်း (09/07)
အကြည်တော် - ရွှေမိုးသည်း (09/07)
အကြည်တော် - ခင်မှုန်မင်္ဂလာဆောင် (09/07)
အကြည်တော် - ဟဒယတက်ကျမ်း (09/07)
အကြည်တော် - ဇော်က . ကနေသည် (09/07)
အကြည်တော် - နတ်ပြည် နံနက်ခင်း (09/07)
အကြည်တော် - ဘီလူး (09/21)
အထင်ကရ - မင်းနဲ့ကိုယ် (Nov 28, 2008)
အထင်ကရ - ကောင်လေးချစ်တဲ့သူ (Nov 28, 2008)
အထင်ကရ - သူဖန်ဆန်းတဲ့သင်္ကြန် (Nov 28, 2009)
အီကြာကွေး - တွေ့ရကြုံရရှတတလေးတွေ (06/30)
အီကြာကွေး - နတ်ရူးတို့ကြောင်နိုင်ပါပေ့ (06/30)
ကလျာ - ဆောင်းဆည်းဆာ(Dec 23, 2008)
ကြည်အေး - မိ(06/28)
ကြည်အေး - အပြင်ကလူ(06/28)
ကြည်အေး - နွမ်းလျအိမ်ပြန် (Dec 23, 2008)
ကြည်အေး - ကျွန်မပညာသည် (Dec 23, 2008)
ဒဂုန်တာရာ + ကြည်အေး - စမ်းမြညတစ်ည (Dec 23, 2008)
ခင်ခင်ထူး - ဆံရစ်ဝိုင်း ၀တ္ထုတိုများ (Dec 23, 2008)
ခင်မျိူးချစ် - ကိုင်းပြောလိုက်စမ်းကွယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ (Dec 23, 2008)
ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း - ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ (06/30)
ခင်ဆွေဦး - ဒို့တိုင်ဌာနီ (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု - လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု - မွှေး (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု - ဘယ်လိုသောအကြောင်းကြောင့်( Dec 23, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - သွေး (07/04)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မုန်း၍မဟူ (07/04)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - အဖြူ (၀တ္ထုတို) (Nov 28, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မေ့အိမ်မက် (Dec 23, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - ပျိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မိုး( ၀တ္ထုတို)(Dec 23, 2008)
ဂျူး - ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့
ဂျူး - လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာ
ဂျူး - ကံကြမာကိုမယုံကြသူများ
ဂျူး - ကျွန်မ၏သစ်ပင် (06/30)
ဂျူး -ကြယ်ကြွေတို့အတောင်ပံ (06/30)
ဂျူး - ကျွန်မချစ်တြဲ့မို့တစ်မြို့ (06/31)
ဂျူး - ချစ်သူရေးတဲ့ကျွန်မ၏ည (06/31)
ဂျူး - မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် (06/30)
ဂျူး - ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်ြး ဖူ (06/30)
ဂျူး- ကျွန်မတို့မိန်းမတွေ - ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ရဲရင့်သော နှလုံးသား-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - တွေ့ချင်လှပြီ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျုး - အ၀ါရောင်ရထား (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး -ရေမျောသီး - ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ဖျားနေတဲ့မြို့-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - နာမည်နဲ့အသက်-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး -မိန်းမနှစ်ယောက်-၀တ္ထုတို( 06/30)
ဂျူး - အနှပညာရှင်များနဲ့စံလက်ရာများ - ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - လေထဲမှာကပျံဝဲကျသူများ (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး - ကောင်းကင်မပါသောည (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး - သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို) (
ဂျူး -မြရဲ့လ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး -မတော်တရော်-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး — ပြတင်းပေါက်-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ဘ၀ဇာတ်စရာ (၀တ္ထုတိုများ) (06/30)
ဂျူး - ငါးမျှားခြင်း - ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - လူနဲ့ကြိုး - ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ရေမျောသီ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - ၀တ္ထုတိုများ (06/30)
ဂျူး — ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ (Dec 23, 2008)
ဂျူး - ရွက်လှေများ (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008)
ဂျူး - ပင်လယ်နဲ့တူသောမိန်းမများ (Dec 23, 2008)
စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) - နေပန်းပွင့်ရဲ့ အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ် (Dec 23, 2008)
စိုးမြတ်သူဇာ - feeling 35 (06/30)
စိုးမြတ်သူဇာ - အနားသတ်သစ္စာ (Nov 28,2008)
ဆွေဆွေအောင် - လွယ်အိတ်ကလေး (Dec 23, 2008)
ဆွေဆွေအောင် - လူညာကြီး (Dec 23, 2008)
ညိုနှင်းအိမ် - အိမ်မက်ပန်း အလွမ်းနှင်းဆီ (Dec 23, 2008)
ပုညခင်- ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မူ(Nov 11,2008)
ပုညခင်- ကြယ်တစ်ပွင့်နဲ့ စံပယ်ဖြူ (Nov 11,2008)
ပုညခင်- လျှိူဝှက်တိတ်ဆိတ်သော (Nov 11,2008)
ပုညခင်- အချစ်နဲ့ကကြိုး (Nov 11,2008)
ပုညခင်- ညခင်းရဲ့ လမင်း(Nov 11,2008)
ပုညခင်- ကဗျာမမှီ (Nov 11,2008)
ပုညခင်- ချစ်သူရှိတဲ့မိန်းမ (Nov 11,2008)
မချိူမော်+ချစ်စံဝင်း - ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ်
မစန္ဒာ - ငယ်သူမို့မသိပါ
မစန္ဒာ -န က်ဖြန်ခါ (07/08)
မစန္ဒာ - တိမ်ဖုံးလို့လမသာ..(07/08)
မစန္ဒာ - စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀ (07/08)
မစန္ဒာ - ဂျီဟောသူ (07/08/08)
မစန္ဒာ - ဆံဌဂံ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - ပန်းပွင့်ခရေ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - ပုစ္ဆာ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - နှင်းဆီ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၇ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၄(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ - အရိပ်(Dec 23, 2008)
မဦး - ပန်းပွင့်မျက်နှာ လိပ်ပြာနှုတ်ခမ်း (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008)
မိုးငြိမ်းဧ နွေနေအောက်မှာ .. ကြွေ(Dec 23, 2008)
မိုးမိုး(အင်းယျား) - စိန်တစ်ပွင့်
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ၀တ္တုတိုများ ၄ (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - မေတ္တာကမ်းနားအချစ်သစ်ပင် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ဝေဒနာကြာပွင့်နီ(Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ညီမလေးက အချစ်ကိုကိုးကွယ်သတဲ့လား (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - မသုဓမ္မစာရီ (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) ဘယ်သူလာကူပါမယ် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - မှတစ်ဆင့် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ဂျိူး (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတ၀ါး (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) - မြူမှော
မောက်ကလေးကို တချက်နှိပ်လိုက်ရင် ငါးစာကျွေးလို့ရပါတယ်။
Sombody Need You Appeal for Cyclone Nargis Victims in Burma (Myanmar)
IMPRESONED IN NOVEMBER 2008
All Political Prisioners
Political Prisioners -Female
People visited this blog
မျိုးမြင်ချို၏တင်ဆက်မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး (ဘာသာပြန်-ဒေါက်တာအောင်ခင်)
သန်းရွှေ၊ မောင်အေး ဖြုတ်ချရေး စီမံချက် အောင်လင်းထွဋ် (ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ မောင်သြ
Happy Birth Day Our Father General Aung San
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းနှင့် ငုရင်ပြင် အင် တာဗျူး (ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း)
မေ့မရသော ဆရာ့ အမှာစကား(ပညာကျော်)
သိုးရေခြုံ ဝံပုလွေများ အကြောင်း (၈၈ ကျောင်းသားတဦး)
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးနှင့် မုသာဝါဒ (အပိုင်း၂) ပညာကျော်
အနှစ် ၂၀၊ မပြယ်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ သင်ခန်းစာ တချို့ (အောင်သာငယ်)
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးနှင့် မုသဝါဒ(အပိုင်း၁) ပညာကျော်
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်နှင့် သူ့ခေတ် စနစ်အခြေအနေ (နေသု -မျိုးချစ်တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း တဦး )
သာသနာ အတွက်လား ဥသျှောင်(ဦးပညာသာမိ)
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် ဘလော့ဂါများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ မောင်သက်ပြင်း (အင်းယားမြေ )
မိခင်စိတ်ရှိသူ(သို့) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်) (သက်ဦး) သုံးရောင်ခြယ်
ဝတ်စုံအသစ် ပြောင်းဦးအရွှေ့နှင့် ပစ်မှတ်သေများ(မျိုးမြင့်ချို)
OUR THOUGHT(ANTI-DICTATORSHIP PEOPLES’ FREEDOM MOVEMENT IN BURMA)
ဝဋ် မှာအမြဲ…ငရဲမှာအပ နှင့် ကျေးဇူးမီဒီယာ
ယူဖရေးတီးစ်နဲ့ တိုက်ဂရစ်ကြားက ညပ်နေတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံ
ဧရာဝတီမှသည်……..မောင်ဘိုးရန် (ခေတ္တ- တိုင်းတပါး) 030608
စက်တင်ဘာ(၂၆)ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (ရွက်စိမ်း)
ကမ္ဘာ့ အကြာဆုံး အကျဉ်းကျ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် (ကြိုင်လှမောင်မောင်)
Song of Nargis Victims(D-Wave)
ရွှေဝါရောင်စပါးတွေ ရင့်မှည့်နေပြီညီမလေး (သစ်ကောင်းအိမ်)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အဖွဲ့များ ကံကြမ္မာ - အပိုင်း (၃) ဗိုလ်ထက်မင်း / ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
အကယ်ဒမီလည်း ယတြာပါပဲ (ဆောင်းပါး) ပညာကျော် / ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
မစ္စတာဂမ်ဘာရီခရီး စာရင်းရှင်းတမ်း (ဆောင်းပါး) ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း / ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏အရှင်သခင်။ ရာဇ (မဟာသား) ၂၈၊ ၁၊ ၂၀၀၉
အနှစ်(၆၀)ပြည့် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား (ရွက်စိမ်း)
လူထုကို ခေါင်းဆောင်မယ့်သူတွေဟာ လူထုကိုနားလည်ရမယ် ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း / ၂၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
၂၀၀၉ မြန်မာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် လူထုအုံကြွမှု (သုံးသပ်ချက်) မင်းနိုင်သူ/ ၂၆ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
ထိုင်း-မြန်မာ အောက်လမ်းခရီး ဟွေ့ဟင်ဖွန်ဂိတ်နှင့် (၉၉၉) လူပွဲစားများ ရဲရင့်မြင့်မောင် / ၂၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များ ကံကြမ္မာ-၂ (ဗိုလ်ထက်မင်း)
ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူး နှိုးဆော်မှုကို လျစ်လျူရှူ မနေသင့်
စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုကို စစ်အစိုးရ ဘာကြောင့် ကြောက်ရသလဲ (ခေတ်ပြိုင် အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)
အနှစ် (၂၀)မှာ ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ? (NCGUB, NCUB နှင့် MPU) ၀င်းထိန်
“ဒီမိုကရေစီကိုတော့ မမြင်ရသေးပါဘူး” မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Mark Canning ၏အမြင်
၂၀၀၉ နှင့် ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်း မင်းနိုင်သူ/ ၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်အာဏာနဲ့ ဖျက်လို့မပျက်နိုင် ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်း / ၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် ဘုန်းကျော် (လက်ဖက်မြေ) / ၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉
၂၀၀၉ ခုနှစ် မှုန်ဝါးဝါး ခေတ်ပြိုင်အယ်ဒီတာ့အာဘော်
၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ အရေးပါသူများ (၁)(ဧရာဝတီ)
သာသနာဖျက်သော ပုဒ်မ(၂၉၅ ) ဖိုးလမင်း
သား (၃) သားနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ လက်တွဲကြ - တရုတ်မ (တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားအရေး ပဟေဠိပုစ္ဆာ(ဒေးဗစ် စကော့ မီသီဆင်-ဧရာဝတီဘာသာပြန်ဆောင်းပါး)
လွတ်လပ်မှု ဆိတ်သုဉ်းတဲ့ နေရာက အပြစ်များ (သြရသ)
DKBA ၉၉၉ တပ်ရင်း(၁) ဗိုလ်ကတုံး လက်အောက်ခံ တပ်သား ဖားဒို့ခို မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံးစီရင်ခြင်းအကြောင်း (ကဆောဝါး)
ထိုင်းနိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးထွေး( ဂျွန်တင်အောင်/ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈ line)
ပြန်ဆုံမယ့် နေ့စွဲမရှိသော ခွဲခွာခြင်း(နှင်းပန်းအိမ်)
ငရဲသားလား နတ်သားလား (ပညာကျော်)
ကိုရွှေတို့အတွက် သေခြင်းတရားဗဟုသုတ (ကျော်သောင်း)
လှုပ်လေမြုပ်လေ ဆုပ်လေစူးလေ (မောင်မောင်လှကြိုင်)
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ နောက်ဆုံးပေါ် အဓမ္မထောင်ဒဏ်များ (ကျော်စွာမိုး)
နအဖရဲ့ နျူကလီးယားအိပ်မက် (ဂါမဏိ)
“တက် ထောင်ရန် စောပါသေးသည်”(D-wave)
အနှစ်နှစ်ဆယ်မှသည် (၈၈၈၈ နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆောင်းပါး) D_Wave
ရှစ်လေးလုံးအမွေတွေကို ကာကွယ်ကြရမယ် ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
“လင်းအာရုဏ်ဆီသို” (၈.၈.၈၈) နှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်-D-Wave
မဆုံးသေးသည့် နောက်ဆုံးအိမ်မက်(၄) ရွက်စိမ်း
နှစ်ဆယ်တစ်ဆယ် တကယ်မလွယ် (မောင်မောင်လှကြိုင်)
မဟာဗျူဟာရှုထောင့်လား အကြောက်တရား အဂတိလား (သန်းစိုးလှိုင်)
ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ ရကိုရမယ် (မောင်မောင်လှကြိုင်)
ဆရာကြီးသိန်းဖေမြင့်၏၁၉၃၀ နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်
အမျိုးသားဓါးစာခံရဲ့ငြင်းပယ်မှု ရဲ့အခြားတဖက် (မောင်မောင်လှကြိုင်)
အနှစ်သာရကို ကွေ့မရှောင်စေချင်ပါ (မောင်မောင်သန်း)
ဒုတိယပင်လုံ (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စီအာပီပီ) ရာဇာဓိရာဇ်
စစ်ခုံရုံးမှတလွဲများမီးဖိုထဲမှာ ချက်လို့တဲ့ဗျား (ကောင်းကင်ပြာ)
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းတော်များနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ခွဲခြားမရပါ(မျိုးမြင့်ချို)
The Final Act ofaDKBA Soldier under the Command of Captain Gadone (Captain Bald).
Referendum Day (or)7th day for the Dead people of Burma after cycolne Nargis(D-wave)
6th month memorial day of September 2007 Saffron Revolution(D-Wave)
Thai Rice prize up is effective on Burma rice market(D-wave)
NLD ၏ပြည်ထောင်စုနေ့ သဘာပတိ မိန့်ခွန်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
CAC(BURMA)၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၀၄/၀၉
2009 စုစည်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ၏ ၆၁နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ၏ တစ်နှစ်တာ အစီအရင်ခံစာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်း၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရပ် ဖော်ဆောင်သင့်ကြောင်း NCUB ၏ အဆိုပြုတင်ပြချက်
CAC(BURMA) ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့သဘာပတိမိန့်ခွန်း၊ မေတ္တာ ရပ်ခံပန်ကြားလွှာနှင့် NLD ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့သဘာပတိမိန့်ခွန်း
Sunday, January 4, 2009 ၂၀၀၉ စုစည်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ၏ ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များသို့ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုမှု ကမ်ပိန်း
၂၀၀၉ စုစည်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ၏ အထူးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်(၄.၁.၀၉)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ၏ နှစ်သစ်ကူး အထူး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Saffron People's Movement Group ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
The Lasted News သတင်းဌာနများ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
Tell the new NDP Government to Protect BC's Endangered Old-Growth Forests ! PLEASE SIGN ! !
First baby in 12 years born on remote Brazil island
Trump, South Korean leader commiserate over upcoming summit - Washington Post
Asia Agento is right, men need to be held accountable – not just for their actions, but also for the impact of their silence
VOA News: Top Stories
Asian Tribune - :: Internet Daily Newspaper ::
Here’s How Prince Harry and Meghan Markle’s Cake Differs from Other Royal Cakes
Trump’s ‘diplomatic vandalism’ on the Iran nuclear deal, Trump’s nuclear deal move hurts America’s reputation, Putin’s pushy foreign policy may not be strategically beneficial, Why Elon Musk blew up at an analyst, Timely theme for World Press Freedom Day
Santa Fe High School student claims students and coaches 'emotionally bullied' suspected shooter
AP Top Headlines At 10 a.m. EST
BBCBurmese.com | သတင်း | Myanmar News index
ကရင်‌ဒုက်ခသည်‌ ပ်ရန်‌မပို့ ‌ရေး က်ရားနာမ်ဟု
ReliefWeb - Headlines
Welcome to the Mizzima News
The News is NowPublic.com - NowPublic.com: The News is Now Public
အခြား ဘလော့နှင့် သတင်းဌာနများ
ထီမံထိုနှင့် ဖာထလယ်ရွာချင်းဆက် ဝင်းရော်ချောင်းကူး တံတား တည်ဆောက်မည်
Don’t Forget it!
Burmese Voice From Bay Area
2009 COLLECTIVE ACTION COMMITTE (BURMA)
Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi
Interview with Burmese Refugee Maung Maung Tate
Aiya Burma Fund
Welcome to Narinjara Arakan News
Welcome to Independent Mon News Agency (IMNA)
To All Religious Organization
What took place in Sept.’07, when the military junta in Burma crushed the peaceful demonstrations by the Buddhist monks was unprecedented. Not only in Burma’s history, but also in the context of the cultural history of the country as well. Although monks in the past, during the colonial period of the British, and the Japanese occupation in 1942-45, were killed because of their involvement in political matters, never in the history of the Burmese people, have so many Buddhist monks been brutally killed, beaten, and shown absolute disregard by those in power who are, and call themselves Buddhist. It isasad and dark chapter of Burma’s history indeed. Monks who were helped by leaders and prominent members of other faiths, such as, Muslem, Christian, Sikh, and Hindu, were also threatened by the military for rendering assistance to the Buddhist monks. Reports about prominent members of other faiths who are also being harassed and intimidated by the regime continually are frequent amongst the communities, within and outside the country. This atrocious situation is the reality today in Burma today. That is why the monks and the organizing committee of the Saffron Robe People’s Movement would like to urge leaders and adherents of the Buddhist faith, and all other faiths: Moslem, Christian, Hindu, and Sikh to truly see what the military regime in Burma is really like. It isadegrading and destructive military regime towards all religious faiths is without doubtachilling and tragic fact. Therefore, members of all faiths within and outside the country, we seek your help in this struggle; to rid Burma ofamilitary regime that has descended to the lowest of the low; for killing monks who dared to call for change for the better of the peoples of Burma. The organizing committee for the Saffron Robe People’s Movement of Burma. Dated 26 DEC.2007 For more information contact to; saffrontoward@gmail.com
PATTA-NEIKUZANA THE EXCOMMMUNICATIVE BOYCOTT
Any could be boycotted towards excommunication if the following eight attributes described in Vinaya Scriptures IV , page 262 , Silavar Text Commentary5are met: 1) Effort are made to deny four essential things _ i.e. monastery ,robes ,food , medicine –to monks 2) Effort are made to endanger the lives of monks or reduce the numbers the them 3) Effort are made to deny place of residence to monks 4) Ten kinds of abusive lanquage are used against monks 5) Effort are made to sow dissension among monks 6) Slander or scorn is made upon buddha’s infinite feat 7) Slander or scorn is made upon Dhamma’s infinite faculty 8) Slander or scorn is made upon Sangha’ s infinite undertaking “I consent to perform excommunicative boycott aganist any lay devotee who endaevors to fullfill any one above eight attributes, Budda said in Sulavar Holy Text. Boycotting does not imply placing the amls bowl upside –dwn ; it means not accepting four essential things donated by lay people who are being boycotted. The proscribing monks also advocate the boycotting act to other monks in the world .The purpose of al this is to make those lay Buddihist who offend noble and good monks realize their mistake and become well-mannered and civilized. If those lay people regret their misdeeds, really become good-mannered and respectful ,and apologize three times,boycott would be called off.
Photos of 88G students group
Burma's News World's News